राधी विद्युतको आइपिओ बाँडफाँडः ९५ हजार २१४ आवेदकको हात खाली, कसले कति पाए ? | suryakhabar.com
Home आर्थिक राधी विद्युतको आइपिओ बाँडफाँडः ९५ हजार २१४ आवेदकको हात खाली, कसले कति पाए ?
राधी विद्युतको आइपिओ बाँडफाँडः ९५ हजार २१४ आवेदकको हात खाली, कसले कति पाए ?
on: January 17, 2018 In: आर्थिकTags: share marketNo Comments
काठमाडौँ । राधी बिद्युत कम्पनी लिमिटेडले निष्काशन गरेको साधारण शेयर (आइपिओ) बुधबार बाँडफांड भएको छ । निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेडका अनुसार आइपिओका ९५ हजार २१४ आवदेकले कम्पनीको सेयर पाएनन् ।
कम्पनीले निष्कासन गरेको ७ करोड ६४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको ७ लाख ६४ हजार ५५० कित्ता शेयरका लागि एक लाख ६६ हजार ३१७ वटा आवेदन परेको थियो । त्यसमध्ये एक हजार ३२७ वटा आवेदन रद्द भएको बिक्री प्रबन्धकले जनाएको छ ।
सदर भएका कुल एक लाख ६४ हजार ९९० आवेदकमध्ये गोलाप्रथाबाट ७१ हजार १०२ सर्वसाधारण आवेदकले दश कित्ता तथा एक आवेदकले एघार कित्ताका दरले शेयर प्राप्त गरेका छन् ।
कुल ७ लाख ६४ हजार ५५० कित्ता सेयरमध्ये कर्मचारीलाई १५ हजार २९१ कित्ता र सामुहिक लगानी कोषका लागि ३८ हजार २२८ कित्ता सेयर छुट्याइएको थियो । बाँकी रहेको ७ लाख ११ हजार ३१ कित्ता शेयर सर्वसाधारणलाई वितरण गरिएको हो।
साधारण सेयर वितरण गरेसँगै कम्पनीको चुक्ता पूँजी ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
धुर्मुस–सुन्तलीलाई लक्षित गर्दै बाँतरले भनेः हामीलाई सम्झने पनि कोही रहेछन्
प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक उपाध्याय भन्छन्ः कार्यालय पुनःनिर्माणपछि आत्मबल थपियो